१ सय २० केजीको एउटा बोका, मूल्य चार लाख बढी ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठपत्रपत्रिका१ सय २० केजीको एउटा बोका, मूल्य चार लाख बढी !
१ सय २० केजीको एउटा बोका, मूल्य चार लाख बढी !
बागलुङ ।एउटा बोकाको मूल्य कति पर्ला ? पक्कै तपाईंले भन्नुहुनेछ– केही हजार तर यहाँ एउटा बोकाको मूल्य ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तोकिएको छ ।बागलुङ नगरपालिका–११ रायडाँडाका चिरञ्जीवी केसीले ४ लाख रुपैयाँ तिर्ने आउँदा पनि बोका नबेचेको बताएका छन् । ‘मैले अझै केही समय पाल्ने भनेर दिइनँ,’ केसीले भने, ‘अर्को बोका किनेपछि साढे ४ लाख रुपैयाँ पाए मात्रै बेच्छु ।’ अस्ट्रेलियन बोयर जातको यो बोकाको तौल १ सय २० केजी छ । यो २८ महिनाको भयो ।केसी पशु प्राविधिक पनि हुन् ।
मौरीपालन व्यवसायबाट तीन वर्ष अघि बाख्रापालनलाई उनले व्यवसायिक बनाएका हुन् । उनको खोरमा अहिले पनि एक सय बाख्रा छन् । स्थानीय खरी जातका बाख्रामा बोयरको क्रस गराएर उनले बाख्रा पालिरहेका हुन् । यो बोका ९० प्रतिशत क्रस बोका हो ।यस्तो विधिले पाल्दा खरी जातको जस्तै घाँस खाने, चर्न रुचाउने र तौल भने बोयरको जस्तै बढ्ने उनको अनुभव छ ।केन्द्रीय भेडाबाख्रा प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत तालिम पाएपछि ३ लाख रुपैयाँ लगानीमा उनले दुई वटा बोका किनेर ल्याएका थिए । रायडाँडामा अहिले १७ बाख्रा फार्म छन् ।
तीमध्ये १० वटा खरी बाख्राका छन् भने सात वटा बोयरका हुन् । ‘बोयर जातको बाख्राका लागि हाडनाता लाग्ने गरी बोका लगाउनु हुँदैन । त्यसैले अब नयाँ बोका ल्याउने योजना छ,’ उनले भने, ‘नयाँ बोका ल्याएपछि यो बेच्ने हो ।’ बोयर जातमा बाख्राले एकै पटक बोका खोज्छन् । त्यसैले कम्तीमा दुईदेखि तीन वटा ब्याडे बोका आवश्यक पर्ने उनले जानकारी दिए ।कान्तिपुरबाट